फेरि फाइनलमा चुक्यो नेपाली महिला फुटवल टोली ! ९ वर्षको अवधिमा यस्तो छ आठौं फाइनल यात्रा::देश र जनताप्रति समर्पित
फेरि फाइनलमा चुक्यो नेपाली महिला फुटवल टोली ! ९ वर्षको अवधिमा यस्तो छ आठौं फाइनल यात्रा
पोखरा- नेपाली महिला फुटबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने लक्ष्य फेरि एकपल्ट पुर्ण बिराम लागेको छ। अन्तराष्ट्रिय आठौं फाइनलमा पुगेका नेपाली फुटवल टोली नाडेज्दा कपमा उज्वेकिस्तानसँग पराजित भएसँगै उपाधि जित्ने लक्ष्यमा पुर्ण बिराम लागेको हो।
फिफा वरीयतामा ५७ स्थान माथि रहेको उज्वेकिस्तानले बिहीबार किर्गिस्तानमा भएको
नाडेज्दा कपको फाइनलमा नेपाललाई ३-२ गोलले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो।
महिला टिमको फाइनल यात्रा
पहिलो साफ च्याम्पियनसिप (बंगलादेश) २०१० – भारतसँग १-० ले पराजित
दोस्रो साफ च्याम्पियनसिप (श्रीलंका) २०१२ – भारतसँग ३-१ ले पराजित
तेस्रो साफ च्याम्पियनसिप (पाकिस्तान) २०१४ – भारतसँग ६-० ले पराजित
पाँचौ साफ च्याम्पियनसिप (नेपाल) २०१९ – भारतसँग ३-१ ले पराजित
११औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (बंगलादेश) २०१० – भारतसँग ३-१ ले पराजित
१२औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (भारत) २०१० – भारतसँग ४-० ले पराजित
हिरो कप २०१९ (भारत) – म्यानमारसँग ३-१ ले पराजित
नाडेज्दा कप २०१९ (किर्गिस्तान) – उज्वेकिस्तानसँग ३-२ ‍ले परजित
रोनाल्डोको नयाँ कार जसको मुल्यमा एउटा शहर किन्न सकिन्छ